Sidee inuu ka soo kabsado Images Khasaaray ka PC, Camera, Memory Card & USB
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Images Khasaaray ka PC, Camera, Memory Card & USB
Photo toogashada ayaa noqday habka ugu badan ee loo hayo xusuus. Photos Digital badbaadiyey on computer, camera, kaadhka xusuusta ama USB mar walba idin ​​xusuusin badan ee maalmood ka dib, oo noqday maal aan farxad. Si kastaba ha ahaatee, aad wax fikrad ah markii ay musiibo dhacdo ay doonaynin inay yimaadaan si ay u burburiyaan PC, camera card, xusuusta ama USB. Photos ayaa la waayay mar uun ay sabab u tahay sababo kala duwan:
• dhaco tirtirto photos / images si joogto ah
• qalabka haysta Photo kharribeen
• formatted ah kaadhka xusuusta, USB ama gaari ku adag
card • Xasuusta noqdo geli karin
• interface ama kala iibsiga file khaladaad keeni image laga badiyay
Is deji marka aad mid ka mid ah xaaladaha kor ku kulmaan. Dhab ahaantii, ee photos lumay weli waa halkan. Oo waxaad iyaga u arki kari maayo, laakiin dib waad heleysaan. Maxaad xusuusan yahay in lagu hayo sawir heysata sida asalka ah, maxaa yeelay, hawlgallada laga yaabaa iney waxyeello photos lumay dheeraad ah. Markaas ka heli software kabashada image , taas oo ay taageertaa inuu ka soo kabsado images lumay kombiyuutar, camera, kaadhka xusuusta iyo USB. Halkan leeyihiin isku day la Wondershare Photo Recovery .
Halkan aynu soo dajiyo iyo ordi version Windows on your computer. Waxaa jira 4 fursadaha si aad u soo kabsado images lumay sida ugu fiican ee aad rabto.
Kabsado sawirrada camera: Si toos ah xiriiriyaan camera digital in PC ka dibna ay maamulaan barnaamijkan. Ladnaansho sawirrada kaadhka xusuusta: Geli aad kaadhka xusuusta (SD Card, ul Xasuusta, iwm) u geliyey dhisay-in booska kaadhka xusuusta ee kombiyuutarka iyo kadibna barnaamijkan. Ladnaansho images sameeyaan USB drive: Isku USB drive qalabka tiro kaydinta kale si aad u computer ka dibna ay maamulaan barnaamijkan. Ladnaansho images sameeyaan gaari ku adag, si toos ah ay doortaan drive gudaha adag ama xirmaan drive adag dibadda in uu ordo software kabashada this.
Hit "Start", ka dibna dooran drive halkaas oo sanamyadiinna lumay ayaa ku yaalla. Guji "Scan".
Kadib markii uu dhamaystay scan ah, dooro "Photo" folder bidixdiisa oo guji file ku jira liiska ay u eegis. Haddii aad ogtahay sida saxda ah nooca image aad rabto inuu ka soo kabsado, waxa kaliya ee aad ka eegi kartaa gal qaab ama xitaa image gaarka ah, ka dibna riix "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer. Ha lagu badbaadiyo sawirrada kabsaday on drive meesha aad ku lumeen oo overwrite laga yaabaa in soo kabashada bannaan iyo sababta ka adag.
Fiiro gaar ah: Waxaad ku eegaan kartaa sawirro halka scan la maarayso. Marka aad ka heli sawirka aad rabto, in aad ku xasil karo iskaanka oo ku soo kabsado marka hore, ka dibna ku sii scan ah. Intaa waxaa dheer, tan Photo Recovery sidoo kale u ogolaataa in aad ka bogsato videos lumay iyo files audio. Haddii aad tahay user Mac ah, waxaad dooran kartaa Photo Recovery for Mac .
Video tutorial soo kabashada image